Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ထောက်ခံမှုဖြင့် q. ai က q. ai ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ထောက်ခံမှုဖြင့် q.ai က q.ai ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
AI-powered ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးသန့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများ၊ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲရှိ "Hedge Fund
NEW YORK - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၃၀ ရက် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းအားကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရန် ရည်ရွယ်၍ Hfrance.fr မှပံ့ပိုးသောကုမ္ပဏီ Q.ai ကယနေ့ hui Q. ကိုကြေငြာခဲ့သည် ai Invest သည်ဉာဏ်ရည်အခြေခံသည့် Multi- မဟာဗျူဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပေးသည်။ Q.ai သည်သုံးစွဲသူများအားကိုယ်ပိုင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲသောနည်းဗျူဟာများကိုကျွမ်းကျင်သူများ၏သုံးစွဲမှုကိုပေးသည်။
Q.ai Invest နှင့်အတူ Q.ai သည်ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ three သုံးခုစလုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၇၅% ကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားသောရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ruptကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
Qai CEO / CIO နှင့်တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Stephen Mathai-Davis မှပြောကြားခဲ့သည်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အပြောင်းအလဲကိုခုခံတွန်းလှန်ရုံတင်မကဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုကိုလည်းလုံးဝဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိလူကြီးများနှင့်စျေးကြီးသည့်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများလက်လှမ်းမီခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Q.ai ကိုထိုဇာတ်ကြောင်းပြန်ရေးရန်နှင့်ယခင်ကမြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိသူများအတွက်ယခင်ကသိမ်းထားခဲ့သောတူညီသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစွမ်းအားပေးရန် Q.ai ကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ပြောချင်ပါတယ် ငါတို့က Wall Street ကိုဖောက်ထွင်းနေတယ် "
အသုံးပြုသူများသည် Apple App Store သို့မဟုတ် Google Play မှ Q.ai Invest ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးမတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်စောင့်ဆိုင်းသူများစာရင်းတွင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကဖိတ်ခေါ်သောအခါသူသည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောပလက်ဖောင်းပုံစံဖြစ်သည်။
> ဝင်ငွေရရှိမှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပြန်လည်ရောက်ရှိ။ စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင်အသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုတွင်အသုံးပြုသော AI ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေချထားပေးမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ : Q.ai Invest သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသမုဒ္ဒရာကိုသူတို့ဘာသာသူတို့သွားလာခွင့်ပြုခြင်းထက်ထိရောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေချထားပေးခြင်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများကိုလျင်မြန်စွာပေးသည်။ 'ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှန်တကယ် : Q.ai Invest သည်သုံးစွဲသူများကိုထောက်ပံ့ရန် AI Cluster နှင့်နက်ရှိုင်းသောလေ့လာသင်ယူမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအသုံးပြုသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ Netflix-ication Q.ai Invest သည်ရိုးရာစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံအစား Sub-Model ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါက ၀ င်ငွေကိုသူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသိမ်းထားခြင်းအားဖြင့်စားသုံးသူတွေကိုအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ သုံးစွဲသူများသည် ၀ င်ငွေအဆင့်အတန်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတစ်ကြိမ်တည်းသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ ပြောင်းလဲသည့်အခကြေးငွေလုံးဝမပေးရ။တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာသာကျသင့်သည်။
အကြောင်းသိကောင်းစရာများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ Q.ai သည် Hfrance.fr ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူအများအားအကောင်းဘက်ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အားပေးသည့်ဆန်းသစ်သော FinTech ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ အရေးကြီးသောထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်လူအများအသုံးပြုနိုင်သော AI စွမ်းအင်သုံးအိတ်ဆောင်စောင်ရန်းရန်ပုံငွေကိုထူးခြားစွာ AI စွမ်းအားဖြင့်သင်အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ပြောင်းလဲနေသောအစုရှယ်ယာမဟာဗျူဟာများနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထိန်းညှိမှုတို့ဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အမှန်တကယ်လက်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံရှိကြသည်။
Q.ai ကို href=>
မကြာခဏ CFA ဇယားကိုကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀-၂၁ တွင် Fin အတွက် Data Scientist ၏သြဇာသက်ရောက်သူအဖြစ် "Benzinga of the Year of the Year" ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်နည်းပညာ။ Stephen သည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်၊ လုံခြုံရေးလေ့လာဆန်းစစ်သူ၊ အစုရှယ်ယာရှင်မဟာဗျူဟာနှင့်ပြည့်စုံသောအချက်အလက်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်။ Stephen သည် Cheddar TV၊ Fox Business, Business Insider, Yahoo! ဘဏ္ာရေး၊ Nasdaq, Benzinga, စွန့် ဦး တီထွင်သူ၊ Fortune စသည်။
ဆဲလ်: 727 -858-9391
2021-04-20 16:26:25 | ခေါင်းဆောင်မှု...
TwitterShare တွင် Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ဒေါင်းလုပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီဝက်ဘ်ဆိုက် Depot ကိုတည်ထောင်သူ၊ ဒန်နီစတားသည်ရာနှင့်ချီသောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီခဲ့သည်။ ထို "ထူးဆန်းသောအရာများ" ဆောင်းပါးများကို Getty ကဘယ်သောအခါမျှမနှစ်သက်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကံကောင်း...
ခေါင်းဆောင်များသည်တန်ဖိုးဖန်တီးသူများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်း (၄) ခု
2021-04-20 16:19:51 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ LinkedinOnyinye သည် MTN နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကော်ပိုရိတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ MTN သည်အာဖရိကရှိအကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Getty များစွာသောအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများကို...
သင်၏စာအုပ်ကိုရေးသားနည်း ၅ နည်းကသင့်စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်စေသည်
2021-04-20 16:04:45 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ရှိမျှဝေရန် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ။ LinkedinPDG မှ Inspiring Lives International၊ Global Sisterhood ၏ဒါရိုက်တာ၊ VIP ၁: ၁ Empowerment Coach, Keynoter & 13x bestselling author ။ သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးစာအုပ်တွင်အခန်းများကိုစတင်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အစွမ်းထက်သောစကားလုံးများဖြင့်ပြည့်နေသောစာကြည့်...
2021-04-20 16:02:10 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Getty ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်တာ ၀ န်ယူပြီးဘက်မလိုက်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်အတုထောက်လှမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေး၊ Appen ရှိ LinkedinDirector ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာကို TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Ethical AI သည်ယနေ့ခေတ်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်အရေးအပါဆုံးအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖ...
သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုမဏ္pိုင်မှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်ပါ
2021-04-20 15:51:38 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် Bob ဝေရူဖောင်ဒေးရှင်း၏စီအီးအို Linkedin အန်းမာရီဒူးဟားတီ။ Getty မတ်လ ၂၀၂၀ မတိုင်မီကျွန်ုပ် ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့ဖြစ်သော Bob Woodruff ဖောင်ဒေးရှင်းကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ငွေသံသရာဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ဤပုံမှန်ထောက်ပံ့ငွေအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြ...
သငျသညျချက်ချင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုစတင်ရန်အရူးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ... သို့မဟုတ်သင်မလား
2021-04-20 15:49:45 | ခေါင်းဆောင်မှု...
TwitterShare တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ LinkedinCMO နှင့် Shareign ရှိ Go To Market မဟာဗျူဟာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကြီးထွားမှုမဟာဗျူဟာများကိုကြီးကြပ်သည်။ GettyI သည်အကြီးစား / အကြီးစား / စျေးကွက်နှောင့်ယှက်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါလက်ရွေးစပီ, တည်နေရာ, etc ပြီးတော့ Covid-19...
2021-04-20 15:42:50 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် Cognyte ရှိ Marketing Marketing မှအရာရှိ၊ G-CMO မှအဖွဲ့ဝင်၊ မဟာဗျူဟာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်ပထမအောင်မြင်မှုမှသည်အောင်မြင်မှုသို့သွယ်ဝိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းအထိ GettyI သည်ကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ခင်ဗျားထင်တာငါအခုသိပ...
Covid-19 သည်အလုပ်ခွင်တွင်းရှိပညာရှင်များကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ သင်ခန်းစာ ၁၃ ခု
2021-04-20 13:00:36 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်မှာမျှဝေပါ Twitter ပေါ်မှာမျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါ Covid-19 ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းဘဝနှင့်စီးပွားရေးကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်စိန်ခေါ်မှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများရှိသော်လည်းပညာရှင်မျ...
ဖောက်သည်များကိုအံ့အားသင့်စေ။ ပျော်မွေ့ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်း ၁၅ ခု
2021-04-20 12:50:34 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါအရည်အသွေးမြင့်သောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုရရှိခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောစျေးကွက်သမားများသိသည့်အတိုင်းတန်ဖိုးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်မေးခ...
Virtual Blues ကိုစွဲစွဲလန်းလန်း: ထိရောက်စွာနှင့်ထိတွေ့နိုင်ရန်မည်သို့
2021-04-20 12:45:24 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Facebook ၌မျှဝေပါ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်စီးပွားဖြစ်အင်္ဂလိပ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုပိုင်ရှင် Franzen-Waschke သည်အဖွဲ့အစည်းများအားစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည့်နည်းပြဖြစ်သည်။ Getty My လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်တွဲဖက်စာရေးဆရာ Deborah Goldstein ကသူမသည်သူမ၏နောက်ဆုံးဆောင်းပ...
ဟောလီးဝုဒ်တွင်လူမည်းအမျိုးသမီးများပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် felischa marye သည်ပိုမိုကြီးမားသောကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
2021-04-19 22:08:03 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Public repositories မှာ chro performance: သင်သုညလား၊ သူရဲကောင်းလား။
2021-04-19 12:17:12 | ခေါင်းဆောင်မှု...
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း e-commerce တွင်မည်သို့အောင်မြင်ရမည်နည်း
2021-04-19 12:16:01 | ခေါင်းဆောင်မှု...
Stop, drop နှင့် post - ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်များကိုမည်ကဲ့သို့ထောက်ပံ့သည်
2021-04-19 12:01:38 | ခေါင်းဆောင်မှု...
မှောင်မိုက်သောပုံစံများကိုနားလည်ရန် - မီးခိုးရောင်ဒေသများနှင့်မည်သို့ဝေးဝေးနေရမည်ကိုနားလည်ပါ
2021-04-19 11:56:08 | ခေါင်းဆောင်မှု...